🏞️ Baarkinnada & Goobaha | Booqo Hultsfred
Meelo leh waqti dib loo milicsado
Haddii aad rabto in aad aragto Hultsfred dhinac cusub, mid ka mid ah jardiinooyinka degmada iyo meelaha fiirsashada ayaa ah goob dalxiis oo qumman. Booqo qurux Beer Weyl ama raaxo leh Beerta geedaha
🖼️ Matxafyada & bandhigyada
Cuntada waxaa dib loogu dhisay si dabiiciya oo dabiici ah oo leh alwaax iyo keymo oo ah mowduuca waxaana lagu qalabeeyay aagag cusub oo cagaar ah, iftiin cusub oo nabdoon, goobo waxqabad sida fudud
Aagga shirkadda waxaa ku yaal beero aad u fiican oo dhir leh oo leh qiyaastii 150 geedo kala duwan, ubaxyo xagaaga ah iyo kuwo soo jireen ah.
Hagadalsparken waxay heshay dhiirrigelin dhab ah sanadkii la soo dhaafay oo hadda labadaba waa la heli karaa oo ka ammaan badan sidii hore. Balli leh macmal
Halkan waxaad ka heli doontaa beerta geedaha, sariiraha ubax ee sannadka ah, beerta ubaxday, beero, barbecue iyo kafee iyo iibinta dhirta. Beerta waxaa gacanta ku haya urur aan macaash doon ahayn, oo ay bilaabeen 2004 dad badan oo xiiseeya
Misterhultsutsikten, Dhulku buuraleyda dhulkaas macnaheedu waa in ay jiraan aragtiyo fara badan oo qurux badan. Mid ka mid ah aragtida ugu quruxda badan ee aad kala kulmi karto Misterhultsberget oo ka baxsan Virserumssjön